သင်္ကြန် မုန့်လုပ်နည်း ၁၅မျိုး | Wutyee Food House
မြန်မာ အတာနှစ်ကူးမှာ စိတ်ဧ။် ချမ်းသာခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ကိုယ်ဧ။် ချမ်းသာခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါစေလို့ Wutyee Food House မှ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သလိုက်ပါတယ်။ သင်္ကြန်မှာ မုန့်တွေ တ၀ကြီး လုပ်စားနိုင်ဖို့ မုန့်လုပ်နည်း ၁၅မျိုးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်..
အုန်းထမင်း နဲ့ ကြက်သားဟင်း
ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး အိုးဘဲဥ
မမ ကောက်ညှင်းပေါင်းလုပ်နည်းလေး တင်ပေးပါဦး ရွှေရင်အေး လုပ်ချင်လို့ပါ
sis ရေ ကောက်ညှင်းပေါင်း လုပ်နည်း အောက်မှာ ရေးပေးထားပါတယ်..
– ကောက်ညှင်းဆန် – ၅၀၀ဂရမ်
– ဆီ – စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
– ရေ – RiceCooker မှာပါတဲ့ ဆန်ချိန်ခွက်သေး တစ်ခွက်
– ဆား – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ဇွန်း
– ကောက်ညှင်းဆန်များကို ရေဖြင့် ဆေးပြီး ရေထဲ ၃နာရီ စိမ်ထားပေးပါ။ မှတ်ချက် (၃နာရီထပ် ကြော်ပြီး ကောက်ညှင်းဆန်များကို ရေမစိပ်ပါနှင့်)
– ၃နာရီပြည့်လျှင် ကောက်ညှင်းဆန်များကို ဇကာဖြင့် ရေပြန်စစ်ပြီး ကောက်ညှင်းဆန်အတွက် ပါဝင်သောပစ္စည်များဖြစ်သော (ဆီ၊ ရေ၊ ဆား) အားလုံးဖြင့် သမအောင် နုယ်ပေးပြီ စတီခွက်ကြီး တစ်ခုထဲထည့်ပြီး ပေါင်းအိုးဖြင့် ကောက်ညှင်းဆန်များ ကျက်သည်အထိ ၁နာရီ ကျော်အထိ မီးပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါင်းပေးပါ။
– ကောက်ညှင်းပေါင်းကို ပူပူနွေးနွေး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီ…
thank for your reply sis
ဟုတ်။ ကောင်းတယ် sis!
April Khin soe says:
I interested & like it.
သင်္ကြန်ထမင်းချက်နည်းလေးပါ..တင်ပေးပါဦး အစ်မရေ..။း) ကျေးဇူးနော့်..။ သင်္ကြန်မှာ မုန့်တွေအများကြီးစားရပါစေနော့း()
ဟုတ် ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်.. ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်.. 😛
ကျေးဇူးပါအမ အခုလိုစုပေးထားတော့ လိုတာလေးတွေပြန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့ သင်္ကြန်တွင်းလုပ်စားမယ်လို့ ကျိန်းဝါးထားတယ် ဟဲ
haaa Please try naw sis!
myo minn says:
your’s wonderful myanmar traditional food and fastival food for world wide people
You are so welcome bro! Thank you also
San Yee says:
very good menu for Myanmar traditional food.
Nu Nu Yee says:
ဟုတ် ကြိုးစားပြီ မုန့်စိမ်းပေါင်း လုပ်နည်း တင်ပေးပါ့မယ်.. 😀
aye boone kyaw says:
အဆင်းရောအချင်းပါပြည့်စုံတဲ့တူမလေးကိုကြည့်ပြီး အန်တီ့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောတူမလေးလည်း Wutyee လေးလို ဖြစ်စေချင်မိတယ်။ ။သင်္ကြန်ကျရင်သင်္ကြန်မုန့်လေးတွေလုပ်ပြီးအိမ် နီးချင်းတွေလဲဝေရမယ်။ကျေးဇူးအထူး တင်ပါတယ်။
၀တ်ရည်ကလည်း ကျေးဇူးပါနော်.. 😀
ခရီးသွားဖို့ ရှိလို့၊ ပြန်လာလို့ အဆင်ပြေရင် သင်္ကြန်ထမင်းချက်နည်း တင်ပေးပါ့မယ်
ညီမလေးကောက်ညုင်းနဲ့လုပ်တဲ့မုန့်ကျက်တိုက်လုပ်နည်းလေးသိ၇င်ပြောပြပေးပါနော် ထညက်ေ၇နဲ့စားတာလေ ကျေးဇူးနော်
မုန့်လက်ကောက်တော့ သိတယ်။ မုန့်ကျက်တိုက်တော့ တခါမှ မစားဖူးဘူး
Ok I will bro!
yi lay wai says:
pls say how to do Mont Phyet Htote…….
ဟုတ်ကဲ့ ကြိုးစားပြီ တင်ပေးပါ့မယ်..
sis, do you know how to make mont lat saung phat?
zarchi oo says:
မရေ မနက်ဖြန်ကြာဇံချက် ချက်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
သာဓုပါ sis ရေ..
အပေါ်က ပုံတွေလင့်ကို နှိပ်ပြီ ချက်နည်းတွေ ကြည့်လို့ရပါတယ်
need to know how to cook
Ok I will try post later 🙂
အမ အုန်းနို့ကျောက်ကျော လုပ်နည်းလေးပြောပြပါဦး ကျမလုပ်စားတော့ အုန်းနို့ကသက်သက်အထက်မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေလို့ အချိန်အဆလေးကောပြောပြပါဦး အမဟင်းချက်နည်းများအလွန်ကောင်းလို့ စာအုပ်ပါဝယ်ထားတယ် အမေရိကန်ထမင်းကြော်နည်းလေးလည်း ကြည့်ချင်ပါတယ် တတ်နိုင်ရငချက်နည်းလေးတင်ပေးပါဦး
စာအုပ်ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်နော် sis။ အုန်းနို့ကျောက်ကျော လုပ်နည်း ကြိုးစားပြီ တင်ပေးမယ်နော်.. 🙂
ညီမရေ ဒိုလ်ဒိုလ် (မုန့်ကလမဲ) လုပ်ကနည်းလေးများသိချင်ပါတယ်
thank zin says:
Plz do meafavor!
I would like to have all of your recipes in English translated to my email. I can’t access your recipe in Web page in English so.
BUT THINGYAN RICE, DRIED FISH AND UNRIPE MANGO NOT INCLUDED WHICH SHOULD BE MAIN COURSE FOR NEW YEAR AS OUR TRADITION
Have you published any cook book? Where can I buy it?
ရည်, မုန့် လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်နည်းလေးလိုချင်လို့ 
ကြက်ဥကိုလက်ဖက်နဲ့ ပြုတ်လို့ ရတယ်တဲ့အဲဒါနည်းလမ်းလေးပြောပြပါ